ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မနေ နို င် လို့ထရေးတဲ့ က ဗျာ
So bright and brave poems.I trust him that's from his heart.
Ko Aung way.
လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကို သမ္မတကြီး လုပ်လုပ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်လုပ်
ဦးမင်းကိုနိုင် လုပ်လုပ် ၊အခြား ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုပ်လုပ် ပြည်သူ တွေ
က မှားတယ်ဆိုရင် မှားလို.ပါ ၊ အစစ တိုးတက်လာတဲ. ခုကာလမျိုး မှာ ပိုပြီး အမှန်တရား ကိုဖုံးကွယ်ဖို.ခက်ပါတယ် ။ ပြည်သူ.အသံကအဓိကပါ ၊
အကြီးအကဲ တွေ၊ ပြည်သူ. လွှတ်တော် အဖွဲ. အစည်းဆိုတာတွေကလည်း မပြောရဲ
အုပ်ချုပ်သူတွေ ရဲ.သမိုင်းကြောင်း အမည်းစက်ဖြစ်
အဓိက က ပြည်သူ.တွေ၇ဲ.အသံ ကိုနားထောင်ပါ ။၊............. ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်တဲ. .....
ပြည်သူတွေကို လက်နက် အားကိုး နဲ.နှိမ်နင်းတာ မလုပ်ဖို.ပါ ။
Ja Guar said...
ကဗျာ ဆရာရေ ဒီအချိန်မှာ ဒီဗျာမျီုး မဖတ်ချင်သေးဘူးဗျာ။
ကဗျာ ဆရာရေ ဒီအချိန်က တိုင်းပြည်
ကဗျာ ဆရာရေ ဒီအချိန်အတွက်
အားအင်ရှိတဲ့ စာတွေ ကဗျာအဖြစ်
ကဗျာဆိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်တယ်။မှားလားဆို တော့ မမှားဘူး။မမှားတဲ့အရာတိုင်းလည်းအမှန်မဟုတ်ဘူး။အကျန်တွေ ချန်ထားတယ်ဆို အမှန်လို့အပြတ်ဆိုလို့မရဘူး။မနေနိုင်လို့ ဖတ်မိတော့လည်းရေးချင်စိတ်ကတားမရတော့ ပြောလိုက်ဦးမယ် ခွေးဟောင်တိုင်းတော့ အသံမြည်မယ်။ဒါပေမယ့်အသံမြည်တိုင်း ခွေးဟောင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။
ကျုပ်လဲ မနေနိုင်လို့ ထိုင်လျက် တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်လိုက်တယ်။ ကဗျာကောင်း ငတ်လွန်းလို့၊ ကိုအောင်ဝေးရေးတဲ့ ကဗျာတွေ အတော်များများ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ မတွေ့လိုက်တာတွေလဲ အများအပြားပေါ့။ ဖတ်မိသမျှထဲမှာတော့ ဒီကဗျာ အကောင်းဆုံးလို့ ဟစ်ချင်တာပဲဗျာ။
အဲ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဖာသာ မလုံလို့လားတော့ မသိဘူး၊ အဆုံးသတ်ပုံက တယ်လဲ ဒေါသကဲသကိုး။ ဘာတဲ့၊ သြော်၊ “ ခွေးဟောင်မှာတော့ သေချာတယ် ” တဲ့။ အဝေဖန်မခံနိုင်ဘူး၊ ဝေဖန်တဲ့ကောင် ခွေးလို့ ကြိုထုလိုက်တာပေါ့လေ။
ထားပါ။ ဘာလို့ မပြန်သေးလဲ မသိဘူးနော်။ ပြည်တွင်းတုန်းကလဲ ရှေ့တန်းမှာ မပါခဲ့ဘူး၊ ပြည်ပရောက်တော့လဲ မပေါ်တစ်ချက် ပေါ်တစ်ချက် မဟုတ်လား။ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ နေရတာထက် အမေရိကန်ဘဝက ပိုမကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ။ ပြည်တွင်းက စာပေအင်အားစုတွေအတွက် တစ်တပ်တစ်အားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အနေရ အစားရချောင်လို့တော့ မသာယာနေနဲ့နော်။ တော်ကြာ ပေါတိုင်းသောက်နေလို့ စောစော လျှောသွားအုန်းမယ်။ ဒါပါပဲဗျာ။